‘ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे'
१३ फेब्रुअरी (किस डे):– यस दिन प्रेमी प्रेमिका चुम्वन (किस) को माध्यमबाट आफ्नो प्रेम दर्शाउनुहोस् ।
१४ फेबु्रअरी ‘ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे'
भनिन्छ प्रेममा न त भुगोल हुन्छ न जात नै । प्रेममा कुनै सीमा हुदैन । प्रेम आफैमा सर्वब्यापी हुन्छ । प्रेममा भित्रि भाव स्नेह हुन्छ । प्रेममा सृफ प्रेम हुन्छ । प्रणय दिवस अर्थात ‘भ्यालेनटाइन डे’ फेब्रुअरी १४ मा भ्यालेनटाइन डे मनाइन्छ ।
फेब्रुअरी १४ प्रेम गर्नेहरुका लागि विशेष दिन अर्थात् भ्यालेन्टाइन्स डे । तर्क गर्नेहरुले त भन्छन्, यो पश्चिमा संस्कृति हो । आयतित संस्कृति हो । तर, प्रेमका पक्षपातीहरू भन्छन्, प्रेमको कुनै भूगोल हुँदैन । प्रेमको कुनै सीमा हुँदैन ।
हुन त केही नेपालीहरू हाम्रो आफ्नै संस्कृतिमा पनि प्रेम दिवस भएको र त्यो कृष्ण अष्टमी भएको तर्कमा जोड दिन्छन् । त्यसैले अर्काको संस्कृति अनुसार प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे मनाउन नहुने तर्क राख्छन् । तर पनि भ्यालेन्टाइनले नेपाली समाजमा पनि जरो गाड्दै छ । १४ फेब्रुवरीका दिन मनाइने यो दिवसमा प्रेम प्रस्ताव राख्ने, प्रेम सन्देशहरू लिने दिने र जीवनसाथी नै रोज्ने पनि गरिन्छ ।
भ्यालेन्टाइन्स डे के हो र कसरी सुरु भयो ?
भ्यालेन्टाइन्स डेको पछाडि एउटा दुस्खद इतिहास लुकेको छ, जुन हामीमध्ये कतिपयलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ । यो दिन सुरु हुनुको पछाडि भ्यालेन्टाइनको देन त छ नै तर भ्यालेन्टाइन को हुन् ? र उनको के योगदानले गर्दा यो दिनलाई विशेष रूपमा मनाउन थालियो भन्ने कुरामा भने थुप्रै विचारहरू भेटिएका छन् ।
यदि तपाईँले पनि कसैलाई प्रेम गर्नुभएको छ । तर आफ्नो मनको कुरा उनलाई भन्न सक्नुभएको छैन भने फेब्रुअरी १४ तपाईँको लागि उचित समय हुन सक्छ । किनकि यो दिनलाई प्रेम गर्नेहरुले विशेष दिनको रूपमा हेर्छन् । र यो दिनमा आएका प्रस्तावहरूलाई पनि प्रेम गर्नेहरुले सकारात्मक रूपमा नै लिन्छन् त्यसैले फेब्रुअरी १४को सुनौलो अवसर नगुमाउनुहोस ।